Sababtii Qariibka Ahayd Ee Ay Barcelona Iska Diidday Inay La Saxeexato Cristiano Ronaldo Oo La Kashifay | Laacibnet.net
Sababtii Qariibka Ahayd Ee Ay Barcelona Iska Diidday Inay La Saxeexato Cristiano Ronaldo Oo La Kashifay
Ronaldinho waxa uu macallin weyn u ahaa Lionel Messi, sidaas darteed may doonayn Barcelona inay lasoo saxeexato Cristiano Ronaldo oo ay lacag raqiis ah ku heli karaysay intii aanu tegin Manchester United.
Xiddiga hore ee reer Brazil waxa uu kacaamin wanaagsan u sameeyey dhiggiisa reer Argentina ee Messi oo isagoo da’yar uu kusoo dhaweeyey Camp Nou, illaa uu haddana noqdo xiddiga dunida oo dhan hadal hayso ee jabiyey rikoodh kasta.
Laakiin fursad kale ayaa usoo baxday Barcelona waqtigii uu madaxweynaha ka ahaa Joan Laporta, taas oo ahayd inay lasoo saxeexan karayeen Cristiano Ronaldo.
Laporte oo hadalay ayaa arrintan kashifay, waxaanu yidhi: ‘Waxaanu lasoo saxaanaynay Ronaldinho iyo Rafa Marquez. Dadkii Marquez ayaa noosoo jeediyey inaanu lasoo saxeexano Cristiano Ronaldo. Waxa uu waqtigaas joogay Sporting Clube.
“Mid ka mid ah wakiilladiisa ayaa noo sheegay inay hayaan ciyaartoy ay 19 milyan kaga iibinayaan Manchester United, laakiin annaga ay naga siinayaan 17 milyan.”
Laporta oo sii sharraxaya sababta ay fursaddaas uga faa’iidaysan waayeen ayaa yidhi: “Waxa aanu waqtigaas lacag ku bixinay Ronaldinho. Cristiano wuxuu ka ciyaarayay inta badan meel ka baxsan dhexda, annaguna waxaanu ku fikirnay inaanu dabboolnay ahlkaas, sidaa darteed waanu iska diidnay, wax qoomamo ahna uma qabo.”
Si kastaba, Manchester United oo isku heli lahayd Cristiano Ronaldo, Lionel Iyo Ronaldinho, isla markaana ay dhexda ka taageeri lahaayeen Xavi iyo Iniesta iyadoo uu afka horena la taagan yahay Samuel Eto’o waxa xaqiiqo ah inay kasii guulo badnaan lahayd sidii ay ahayd 15kii sannadood ee ugu dambeeyey.
uuuuuuuuuuf haduu imaan lahaa Maruun Barcelona waligay ma tareen runtii axadkaasi